Shopify टेम्प्लेटहरू: Shopify को लागि उत्तम टेम्प्लेट वेब पृष्ठहरू | क्रिएटिभ अनलाइन
नेरिया मोर्सिलो | | पुनरावृत्त, टेम्प्लेट
स्रोत: हाइपर टेक्स्ट
ई-कमर्स को आगमन संग, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको वृद्धि बढाउन र अनुयायीहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गर्न आफ्नो व्यवसायको उपस्थिति नवीकरण गर्न आवश्यक छ।
यस पोस्टमा, मात्र होइन हामी तपाईलाई यो Shopify बारे के हो भनेर व्याख्या गर्न जाँदैछौंयदि तपाईंले अहिलेसम्म यसको बारेमा सुन्नु भएको छैन भने। तर पनि, हामी तपाइँलाई केहि उत्कृष्ट वेब पृष्ठहरू देखाउन जाँदैछौं, जहाँ तपाइँ अनन्त टेम्प्लेटहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, तपाइँको व्यवसायलाई अझ राम्रो संगठित गर्न र उपस्थितिलाई धेरै रोचक बनाउन सक्षम हुने उद्देश्यले।
यहाँ हामी Shopify बारे थप व्याख्या गर्छौं।
0.1 Shopify के हो
1 टेम्प्लेटहरूको लागि वेबसाइटहरू
Shopify के हो
हामी Shopify लाई एक प्रकारको इलेक्ट्रोनिक वाणिज्यको रूपमा परिभाषित गर्छौं, त्यो हो, यो सही ठाउँ हो यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईंको आफ्नै अनलाइन व्यापार वा भौतिक स्टोर निर्माण गर्नुहोस्। अनलाइन काम गर्ने स्टोरहरू, अर्थात्, अनलाइन, यो स्रोत प्रयोग गर्नुहोस् किनकि यसले तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै वेबसाइट र / वा Shopify को साथ व्यक्तिगत रूपमा दुबै अनलाइन बेच्न अनुमति दिन्छ।
त्यसैले Shopify एक ईकमर्स वेबसाइट निर्माणकर्ता हो जुन शुरुआती देखि ईकमर्स विशेषज्ञहरु सम्म सबै को लागी विकल्पहरु संग छ। यदि तपाईं Etsy सँग परिचित हुनुहुन्छ भने, तपाईं यस स्रोतसँग अझ बढी परिचित हुन थाल्नुहुनेछ।
तपाईं यसलाई आफ्नै लागि प्रयास गर्न Shopify को 14-दिनको निःशुल्क परीक्षणको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको परीक्षण को समयमा, तपाइँ तपाइँको आफ्नै अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, निःशुल्क Shopify एपहरू प्रयास गर्नुहोस्, र तपाइँको पहिलो बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Shopify को लागि मूल्य निर्धारण प्रति महिना $9मा सुरु हुन्छ यदि तपाइँ लाइट योजना प्रयोग गर्नुहुन्छ। यद्यपि, धेरैजसो अनलाइन स्टोरहरू प्रति महिना $ 29 को आधारभूत Shopify योजनाको साथ सुरू हुन्छन्। यदि तपाइँसँग पहिले नै व्यवसाय चलाउने अनुभव छ भने, तपाइँ Shopify Advanced वा Shopify Plus को लागी रोज्न सक्नुहुन्छ तपाईको व्यवसायको आवश्यकता अनुसार।
त्यो थोरैलाई थाहा छ यो उपकरणले प्रशासक प्रदान गर्दछ जसले तपाइँलाई तपाइँको स्टोर को प्रदर्शन र वृद्धि मा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ। यसका लागि धन्यवाद, तपाइँ सबै आवश्यक स्रोतहरूसँग अद्यावधिक हुन सक्नुहुन्छ ताकि तपाइँको स्टोर निरन्तर गतिमा रहन्छ।
Shopify एक नि: शुल्क विषयवस्तु प्रदान गर्दछ जुन स्वचालित रूपमा तपाइँको अनलाइन स्टोरमा अपलोड हुन्छ, जसलाई तपाइँ तपाइँले चाहेको कुनै पनि तरिका अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो शुरुवातकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ जो Shopify प्लेटफर्मले कसरी काम गर्दछ र उनीहरूको सफलताको सम्भावनाहरू के हो भनेर जाँच गर्न चाहन्छन्। अर्को शब्दमा, तपाइँसँग तपाइँको वेबसाइट लाई तपाइँको ब्रान्ड को शैली मा अनुकूलन गर्न को लागी अनुकूलित गर्न को लागी स्वतन्त्रता छ। तपाईं नि: शुल्क फन्टहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, रङ योजना परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै फोटोहरू थप्न सक्नुहुन्छ, आदि।
Shopify क्लाउडमा रहन्छ, यसको मतलब तपाईले आफ्नो व्यवसायलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटकरीमा, यो उपकरणले तपाईंलाई विभिन्न विषयवस्तुहरू मार्फत तपाईंको स्टोरको डिजाइन र उपस्थिति सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंले आफूलाई मनपर्ने तरिकामा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र पनि तपाईंलाई भुक्तानी प्रशोधन प्रदान गर्दछ, जसले तपाईंलाई तपाईंले बेच्ने उत्पादनहरू स्वीकार गर्न र भुक्तानीहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो एक आदर्श उपकरण हो यदि तपाइँ एक अनलाइन व्यवसाय खोल्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ अझै कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन।
यहाँ केहि वेबसाइटहरू छन् जुन तपाईंले टेम्प्लेटहरू फेला पार्न पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
टेम्प्लेटहरूको लागि वेबसाइटहरू
स्रोत: अर्बन टेक्नो
टेम्प्लेटहरू फेला पार्नका लागि केही उत्कृष्ट वेबसाइटहरू हुन्:
यदि तपाइँ कपडा वा सामानहरूको लागि ड्रपशिपिङ स्टोर सेटअप गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको विषयवस्तु होली हो। हुलीको डिजाइन हर्षित र रंगीन छ, जुन अनौपचारिक र हर्षित पसलहरूमा लक्षित छ। यो Shopify टेम्प्लेटमा 10 पूर्व डिजाइन डेमोहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो गृह पृष्ठको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन् भने पनि, तपाईंलाई उपयुक्त हुने विषयवस्तु अनुकूलन गर्न समस्या हुने छैन, किनकि तपाईंले कन्फिगरेसन प्यानलमा विकल्पहरू चयन गरेर त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को आधारभूत तत्व यसको उत्तरदायी डिजाइन हो, जुन सबै प्रकारका स्क्रिन र उपकरणहरूमा पूर्ण रूपमा देखिने छ।
हुलीले निम्न प्रकार्यताहरू पनि समावेश गर्दछ:
वांछित उत्पादन सूची।
पपअप विशेष प्रस्तावहरूको लागि।
हालको कानून र RGPD नियमहरूमा अनुकूलन अनुसार अनलाइन स्टोर नीतिहरू।
उत्पादनहरूको द्रुत दृश्यहरू।
बाह्य उत्पादनहरु को लिङ्क।
360º छविहरू मार्फत उत्पादनहरू हेर्नुहोस्।
AJAX प्रयोग गरेर पृष्ठ नछोडिकन कार्टमा वस्तुहरू थप्नुहोस्।
सरल, एक Shopify टेम्प्लेट वेबसाइट, उत्तम छ यदि तपाईं भर्खरै ecommerce को संसारमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी थप उन्नत Shopify सेटिङहरू गरिन्छ भनेर अपरिचित हुनुहुन्छ। यो धेरै सफा टेम्प्लेट हो, संरचित ठूला मेनुहरू र धेरै नमूना उत्पादनहरूको साथ, नेभिगेसन साइडबार प्रयोग गरेर। तपाईं रङ प्यालेट, कर्पोरेट टाइपफेस, तपाईंको लोगो र विषयवस्तुको शैली जस्ता तत्वहरूको श्रृंखला पनि अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको मुख्य कार्यहरू समावेश:
साइडबारमा Accordion मेनु।
Modo जुम उत्पादनहरूमा होभर गर्दै।
सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू खण्ड।
प्रत्येक उत्पादन पानामा जिज्ञासु प्रभावहरू मार्फत एनिमेटेड छविहरू।
AJAX प्रविधि प्रयोग गरेर पृष्ठ नछोडिकन कार्टमा थप्नुहोस्।
सामाजिक सञ्जालहरूमा साझेदारी गर्न बटनहरू।
तपाईंको आफ्नै पाठहरूको साथ व्यक्तिगत भुक्तानी स्क्रिन।
यदि तपाइँ फेसन, सजावट, गहना, लक्जरी सामान, आदि सम्बन्धित परिष्कृत उत्पादनहरू बेच्नुहुन्छ भने। तपाईले बेच्न लाग्नु भएको उत्पादनको प्रकार अनुसार तपाईलाई टेम्प्लेट चाहिन्छ। त्यसपछि, सबै भन्दा राम्रो विकल्प Barberry छ, एक minimalist, सुरुचिपूर्ण, understated र avant-garde Shopify विषयवस्तु.
यस Shopify टेम्प्लेटका सबैभन्दा प्रमुख तत्वहरू हुन्:
विभिन्न मुद्राहरूमा बिक्रीको लागि मोड्युल।
छविहरूको प्रगतिशील लोडिङ।
उत्पादनको द्रुत दृश्य।
तपाईंको प्रस्तावहरूको वैधता सीमित गर्न काउन्टडाउन।
कुल उत्पादनहरू बिक्री।
फेरि सूचना फारम शेयर.
रङ र साइज चयनकर्ता।
AJAX प्रविधिको साथ कार्ट बटनमा थप्नुहोस्।
व्यक्तिगत पृष्ठ हेडरहरू।
यदि हामीले अहिलेसम्म देखाइएका अनलाइन स्टोरहरूका लागि सबै टेम्प्लेटहरू छन् भने, तपाईंले अधिकतम व्यक्तिगतकरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई ध्यान दिन सुझाव दिन्छौं किनभने Avone को बारे मा छ 1.000 कन्फिगरेसन विकल्पहरू.
यो Shopify टेम्प्लेटले तपाईंलाई निम्न खण्डहरू अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ:
पूर्ण पृष्ठहरू डिजाइन गर्नुहोस्।
हेडर परिमार्जन गर्नुहोस्।
आफ्नो आवश्यकता अनुसार फुटरहरू अनुकूलन गर्नुहोस्।
तपाईले चाहानु भएको सबै रंगहरू परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाइँको कर्पोरेट पहिचान संग धेरै संगत टाइपफेस प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंसँग 20 पूर्व-डिजाइन डेमोहरू पनि छन् र एकल चरणमा, तपाईंले आफ्नो गृह पृष्ठ सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँ पूर्वनिर्धारित विकल्पहरूसँग जारी राख्न रुचाउनुहुन्छ भने, तपाइँसँग 10 विभिन्न प्रकारका स्टोर पृष्ठहरू, 10 हेडर शैलीहरू, 8 विभिन्न प्रकारका उत्पादन पृष्ठहरू, आदि छन्।
अतिरिक्त कार्यक्षमताहरूको रूपमा, निम्नहरू बाहिर खडा छन्:
पपअप आफ्नो लागि सदस्यहरू प्राप्त गर्न समाचार पत्र.
सबै प्रकारका फिल्टरहरू।
GDPR को लागि अनुकूलन।
खोज बाकसमा स्वत: पूर्ण।
बेसलले तपाइँलाई तपाइँको सम्पूर्ण स्टोर एक धेरै सहज भिजुअल बिल्डर मार्फत कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ आधारित काम गर्दछ ब्लकहरू तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँको पृष्ठमा तपाइँ चाहानु भएको धेरै धेरै प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। एक अनुकूलन जुन तपाइँको कर्पोरेट पहिचान संग संगत हुनुपर्छ, र यो सामान्यतया एक रङ प्यालेट छनौट र लोगो अपलोड गर्नु भन्दा धेरै अगाडि जान्छ।
तर यदि तपाइँलाई तपाइँको लागि उपयुक्त टेम्प्लेट अनुकूलन गर्न गाह्रो छ भने, तपाइँ तपाइँको पृष्ठ को लागी 30 पूर्वडिजाईन डेमो बीच छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। घर। र सबै भन्दा राम्रो कुरा त्यो हो रंग योजनाहरू असीमित छन्, ताकि तपाईले आफ्नो Shopify विषयवस्तुलाई कुनै पनि प्यालेटमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
बासेलले निम्न विकल्पहरू समावेश गर्दछ:
पपअप उत्पादनहरूको द्रुत दृश्यको लागि।
आकार र रंग चयनकर्ता।
प्रत्येक उत्पादनको छविहरूको 360º दृश्य।
उत्पादनहरूको थम्बनेलबाट अर्डरहरू राख्न द्रुत खरिद बटन।
Fरिच खण्डहरू जसले तपाईंको स्टोरको SEO सुधार गर्दछ।
Foxic ती Shopify टेम्प्लेटहरू मध्ये अर्को हो जुन Oberlo सँग पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ। यो स्रोतले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ सफा र न्यूनतम डिजाइनको साथ एक आधुनिक स्टोर स्थापना गर्नुहोस्, जुन मुख्य ड्रपशिपिंग प्लेटफर्महरू र मार्केटप्लेसहरूसँग पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
यो उपकरण एक धेरै लचिलो टेम्प्लेट वेबसाइट हो, त्यसैले यसले तपाईले सोच्न सक्ने लगभग कुनै पनि ठाउँमा सेवा गर्दछ। र तपाईं आफ्नो मनपर्ने आफ्नो स्टोर को डिजाइन अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा 40 पूर्व-डिजाइन डेमोहरू छन् एउटा गर्न घर उत्पादन पानाहरूको लागि 10 फरक पृष्ठहरू सहित, तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप थप। र तपाइँसँग तपाइँको संग्रहको लागि 8 फरक पृष्ठ शैलीहरू र 8 फरक ब्लग ढाँचाहरू छन्, जसले व्यक्तिगतकरणको डिग्रीलाई धेरै रोचक बनाउँछ।
Foxic मा समावेश सबै भन्दा उत्कृष्ट सुविधाहरू हुन्:
कार्टमा थप्न स्थिर बटन।
उन्नत खोज फिल्टरहरू।
प्रस्तावहरू र छुटहरूको लागि समय सीमाहरूसँग काउन्टडाउन काउन्टरहरू।
अन्ततः, यी स्रोतहरूलाई धन्यवाद, व्यापार वा अनलाइन स्टोर डिजाइन गर्ने तथ्य हाम्रो औंलाको छेउमा छ। हामी पनि आपूर्ति, पोर्टो, Kalles, Apparelix वा एला जस्ता साइटहरू फेला पार्छौं, जहाँ तपाइँ टेम्प्लेटहरूको खोजी जारी राख्न सक्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी तपाईंलाई यस उपकरणको बारेमा थप खोज जारी राख्न र तपाईंको आफ्नै व्यवसाय सिर्जना गर्ने र यसलाई शीर्षमा लैजाने साहसिक कार्य सुरु गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
के तपाईंले आफ्नो नयाँ व्यवसाय डिजाइन गर्न थाल्नुभएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » Shopify टेम्प्लेटहरू
छविबाट पाठ निकाल्नुहोस्
ग्राफिक डिजाइन कार्यक्रम